Tongasoa eto amin’ny Global Voices i Connie Moon Sehat · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 11 Jolay 2019 15:38 GMT
(Lahatsoratra nivoaka tamin'ny taona 2016)
Ry namana GVers,
Manana fahaizana tsy dia mahazatra sy hafa i Connie, ary tokony ho fameno lehibe ho an'ny fiarahamonintsika. PhD momba ny tantara izy, ary mpandriafitra rindrambaiko sy arshitekta” tobin-tahiry tsy mitady tombontsoa ara-bola izay nandany ny ankamaroam-piainany tamin'ny asa maha-olombelona nomerika. Avy ao amin'ny Foibe Carter izy, izay tale mpiara-miasa amin'ny Fandaharana ho an'ny Demaokrasia, ary namolavola ny Open ELMO Initiative, sehatra tovozona malalaka ho an'ny fifidianana sy ny fanarahamaso ny zon'olombelona. Izy koa no mpiara-mitantana ny Zotero, rindrambaiko fanomezana fanamarihana sy toro-boky noforonina ho an'ny Foiben-Tantara sy ny Media Vaovao tao amin'ny Oniversite George Mason. Miteny Anglisy, Alemana, Frantsay ary Koreanina kely i Connie.
Manomboka amin'ity herinandro ity i Connie, ary tena liana amin'ny firesahana amin'ireo mpikambana ao amin'ny vondrom-piarahamonin'ny GV mikasika ny asa, ny traikefa momba ny famoronana tantara, ny olana sy ny filàna ara-teknolojika, ary ny faniriana.
Ho fampahatsiahivana anao, ny tetikasa NewsFrames dia hamorona fitaovana nomerika sy dingana famoahana hanaovana fandalinana haingana ny endrika sy ny fironana media antserasera eo amin'ny tsenan'ny fampitam-baovao manerantany, ary mitarika fikarohana momba ny resadresaka, ny vaovao ary ny mediam-bahoaka manerantany. Ny tanjonay dia ny hamoaka famintinana ireo tantara malaza, lehibe sy zara raha notaterina isaky ny firenena sy lohahevitra, ary koa ireo tantara mifototra amin'ny angon-drakitra sy ny olana mivaingana izay azo avy amin'ny fikarohana.
Raha mandroso ny NewsFrames, dia hitady mpikambana ao amin'ny vondrom-piarahamonina liana amin'ny fiaraha-miasa momba ny hevitra, ny rafitra ary ny fanandramana ny fifamoivoizan'ny asa famoahana, ary amin'ny farany, amin'ny sehatra izay hatsangantsika miaraka amin'ny Center for Civic Media an'ny MIT Media Lab, izay misy an'i Ethan Zuckerman, mpiara-nanorina ny GV.
Faly izahay manana ireo mpikambana ao amin'ny vondrom-piarahamonina GV sy ny hafa liana amin'ny fiaraha-miasa aminay ary mizara ny traikefany sy mandray anjara amin'ny fampandrosoana. Raha liana ianao, dia manehò hevitra eto amin'ity lahatsoratra [teny anglisy] ity azafady, na manorata mivantana any amin'i Connie ao amin'ny pejin'ny mpanoratra.